एक होला त जसपा ? फुटेमा आधिकारिकता कसले पाउँछ ? – Halkhabar kura
४ श्रावण २०७८, सोमबार १९:०१
एक होला त जसपा ? फुटेमा आधिकारिकता कसले पाउँछ ?
आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वा’सको मत दिँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एक भएको जस्तो देखियो। हुन त जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्ष दुबैलेआ–आफ्नै गुटगत निर्णय गरेका थिए तर दुबै निर्णय एकै थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सहभागी ठाकुर पक्षले अन्तिम समयमा देउवालाई मत दिने निर्णय गरेको थियो। उपेन्द्र पक्ष भने लामो समयदेखि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा रहेको छ।
हाल जसपाको वि’वाद निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ। आइतबार मात्र आयोगको इजलासमा वैधानिकता वि’वादबारे सुनुवाइ सुरू भएको थियो। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार केही दिनमा एउटा पक्षले आधिकारिकता पाउनेछ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैतिर यो समूहको प्रष्ट बहुमत भएकाले आयोगले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने यादव पक्षको बुझाइ छ। दुबैतिर अल्पमतमा परेको ठाकुर पक्ष भने एकताका लागि लचक भएको छ। सोमबार बबरमहलमा बसेको बैठकमा यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्नेबारे छलफल गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
तर पार्टी फुटाउन चाहिने न्यूनतम संख्या दुवैतिर गुमाएपछि ठाकुर पक्ष एकताका लागि तयार भएको यादव पक्षको बुझाइ छ। ‘ठाकुर–महतो पक्षबाट एकता गर्नुप¥यो भनेर अत्याधिक दबाव दिइरहेका छन्,’ यादव निकट एक नेता भन्छन्, ‘उनीहरु जस्ताको तस्तै फर्कन चाहन्छन्। आफ्नो पक्षका सांसद र नेता कसैलाई पनि कारबाही नहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ। त्यो त्यति सजिलो देखिँदैन।’
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयं भने अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबाहेकलाई पार्टीमा ल्याउने पक्षमा रहेको ती नेताले जिकिर गरे। उनका अनुसार आयोगले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पनि धेरै नेताहरु आफ्नो समूहमा आउने उनको अपेक्षा छ।
ठाकुर पक्षका केही नेताहरुले यादवसँग नेता राजेन्द्र महतोको व्यक्तिगत टक’रावका कारण पार्टी एकतावद्ध गरेर लैजान संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सहयोग र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। छलफल सकरात्मकरुपमा अघि बढेर आयोगबाट निवेदन फिर्ता भएमा जसपा एक हुन सकने सम्भावना जीवितै छ।
Previous भीम रावलले राजीनामा फिर्ता लिन लागेका हुन् ?
Next किन बाँदर बने युवासंघका नेता ?